१० बर्षसम्मकाे प्रेममा धोका खाएपछि सुनसरीका यी युवकले भावुक स्टाटस लेख्दै सप्तकोशीमा हा,मफा,ले! – PathivaraOnline
Home > समाचार > १० बर्षसम्मकाे प्रेममा धोका खाएपछि सुनसरीका यी युवकले भावुक स्टाटस लेख्दै सप्तकोशीमा हा,मफा,ले!
admin February 11, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाडौं – प्रेममा धोका पाएको भन्दै सुनसरी बराहक्षेत्रका एक युवक सप्तकोसीमा हाम फालेर बे,पत्ता भएका छन् ।इटहरीका अन्दाजी ३० वर्षीय राजेश बानियाँ मंगलबार साढे ४ बजे बराहक्षेत्र–१ स्थित कोसी पुलबाट हा,म फा लेर बे,पत्ता, भएका हुन् । कोसीमा हा,म फा,ल्नुअघि उनले फेसबुकमा केही तस्वीरसहित स्टाटस लेखका छन् । उनले प्रमिकाले १० वर्षसम्म सम्बन्ध राखेर अचानक अर्कै केटासँग बिहे गरेको भन्दै आत्मह,त्या गरेका हुन् ।
१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि मसँग सम्बन्ध राखेर विना कारण अचानक तिमीले अर्को केटासँग बिहे गर्न लागेको देखेर बाँच्ने दिन अन्तिम हो जस्तो लाग्यो । केही छैन, आसा छ तिमीले यो सबै खुशी तिमीलाई पाउने छौ । गूड बाइ इसु, आसा छ तिमीले मलाई मा,फ गर्नेछौं’, उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।
उनले हाम फालेको स्थान नजिकै को३७प ७ नम्बरको रातो रंगको कालो बुलेट, एक जोर जुत्ता, मोटरसाइकलको बिलबुक र लाइसन ट्रायल पास गरेको कागज फेला परेको इराला प्रहरी कार्यालय चतराले जानकारी दिएको छ ।
सोमबार हराएकी १५ महिने बालिका मृ.त भेटिइन्
सिरहा । जिल्लाको बडियारपट्टी गाउँपालिकामा एक बालिका मृ,त अवस्थामा भेटिएकी छिन् । सोमबार अरान्ह हराएकी स्थानीय देवेन्द्र यादवकी १५ महिने छोरी आशिका यादवको श,व मंगलबार अपरान्ह घर नजिकैको पोखरीमा प्ला,ष्टि,कको वोरामा पो,को,पारी फा,लि,एको अवस्थामा फेला
परेको हो ।आगनमा खेल्न छोडेर घरमा पुरी पकाउँदै गर्दा छोरी ह,रा,एको बालिकाको परिवारले जानकारी दिएको छ । पुरी पकाएर छोरी खोज्दा नभेटेपछि रातभर खो,ज,त,ला,स गरेपनि बालिका फेला परेकी थिइनन् । बालिका फेला नपरेपछि राती नै प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो ।प्रहरी र आफन्त सबै मिलेर खोजतलास गरेपछि घर नजिकको पोखरीमा प्ला,ष्टिकमा पोको पारी फा,लि,एको अवस्थामा बालिकाको श,व
फेलापरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।प्रवक्ता घिमिरेले डु,वे,र म,रे,को हो वा मा,रे,र पोखरीमा फा,लिएको हो भन्ने अहिले नै नखुलेको, त्यो पो,ष्ट,मा,र्टमपछि मात्र खुल्ने तर घटनाको प्रकृति हेर्दा ह,त्या भएको स्पष्ट देखिएको दाबी गरे ।प्रहरीले घ,टनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । शव परीक्षणको लागि जिल्ला अस्पताल सि,रहा लगिएको छ ।
तेजपत्ताले खाना स्वदिष्ट बनाउने मात्र होइन हजुर एक पल्ट यसलाई जलाएर हेर्नुहोस, अनि देख्नुहुनेछ…